CISSP Exam Prep – Anwụrụ The InfoSec ule
CISSP bụ a ụwa ghọtara asambodo na ubi nke IT Nche na nlezianya chọrọ gụnyere a 75% ruru nke ziri ezi ajụjụ. Na ukara doro site U.S. Ngalaba agbachitere ha na DoDD 8570 asambodo na ANSI ISO / IEC nzere ntozu, na CISSP designation na-anọchi anya a bara uru asambodo nke nwere ike inyere gị aka inwe ma ọ bụ na-ọrụ na ya ma ọ bụ na-.
Na n'elu 93,000 ndị mmadụ gbaara na 149 mba, na CISSP bụ uwa ọkọlọtọ na mgbe ụfọdụ a chọrọ maka ọrụ ọnọdụ. Ọ bụrụ na ị na-atụle ịkpata gị CISSP designation, ndị na-esonụ pụrụ inyere gị aka na gị ụzọ na asambodo.
Gịnị bụ CISSP?
The CISSP akwụkwọ ma ọ bụ akwụkwọ Ozi Systems Nche Ọkachamara bụ ihe nyere ikike asambodo na-agwa nwere ọrụ na ị na-eru na-arụ ọrụ a nso nke IT na BỤ ubi, na ubi gụnyere nche okacha na oru, IT nduzi, nnyocha na, usoro engineer, na ndị ọzọ.
Na ule maka 8 ngalaba na 250 ajụjụ, ule bụ ọtụtụ na-achọ a otutu ọmụmụ. Otú ọ dị, ọ bụ nke mbụ ANSI ISO / IEC nyere ikike ozi nche udomo, nke na-eme ya-achọsi ike na ọtụtụ IT na BỤ ọrụ oghere, karịsịa maka U.S. ọchịchị, nke na-eji CISSP n'ihi na ya asambodo ụkpụrụ.
Ọ bụrụ na ị na-eche otú na-CISSP asambodo, i nwere ike iji na-esonụ ụkpụrụ nduzi. CISSP chọrọ na-agụnye afọ ise nke na-arụ ọrụ ma ọ bụ na ahụmahụ ọrụ afọ anọ ahụmahụ na a afọ anọ ma ọ bụ elu ruo n'ókè na a yiri ubi. Ị na-enwe na Akara 700 ma ọ bụ elu na a kacha nke a 1000 Akara. Na 250 ajụjụ gụnyere 20 ndị na-abụghị isi mgbakọ na mwepụ ajụjụ, a averages ka a chọrọ banyere 75% ziri ezi azịza.
Ozugbo ị ifọnke, i nwere ọnwa itoolu mezue fọdụrụ nke ngwa, nke na-agụnye na ihe mbianye site na (ISC)² so, -emecha na-Ngwa mbianye ụdị na ịdenye aha na koodu nke ụkpụrụ omume. Ị na-enwe na-eme gị CISSP ọ bụla afọ atọ na 40 CPE nọgidere na-akụziri Ebe e si nweta kwa afọ ma ọ bụ ngụkọta nke 120 n'ime afọ atọ.
CISSP Akwụ ụgwọ
The CISSP akwụ ụgwọ $549 ma ọ bụrụ na ị denyere aha tupu oge maka zuru awa isii udomo. Rescheduling akwụ ụgwọ $50 na ịkagbu ụgwọ $100. Ị nwekwara ike ịhọrọ ide maka CITREP nye iji nweta enyemaka na ego. Dabere na ebe i ule, ị nwere ike ịkwụ ụgwọ ihe ọzọ $50 nhazi ego mgbe ẹsụk gị ngwa. Ị na-akwụ ụgwọ ihe kwa afọ $85 CISSP mmezi ego. Ndị a na-akwụ ụgwọ na-adịghị na-agụnye ndị na-eri na-amụ ma ọ bụ CISSP akwụkwọ, nke na-adịghị abịa na udomo.
Ịmụ N'ihi na CISSP udomo
Ọ dị mkpa na-amụ maka CISSP udomo, ọbụna ma ọ bụrụ na ị na-enwetawo n'ubi gị. The (ISC)² awade ụfọdụ gratuitous ọzụzụ ihe, ma ọtụtụ ndị nhọrọ na-adịghị free. CISSP ọzụzụ nhọrọ na-agụnye àjà site (ISC)² nakwa dị ka e nyere ikike ọzọ nkụzi ma prep ọmụmụ.
CISSP akwụkwọ bụ ndị dị na omume ajụjụ, omume ule na azịza ndakpọ. The Official (ISC)² Nduzi na CISSP dị na Azụ siri ike na dị ka ihe ebook maka mfe onwe-ọmụmụ ohere. I nwekwara ike ibudata a omume ule ngwa, nke ebubo maka onye ọ bụla obere omume ule nke 25 ajụjụ.
Ọ bụrụ na ị na-adịghị mma na onwe-ọmụmụ, mgbe ahụ a nke atọ CISSP prep N'ezie bụ ọzọ nhọrọ. Ndị a na-emekarị na-agụnye CISSP akwụkwọ, omume ule, ajụjụ mmiri, na mgbe ụfọdụ nkụzi ma ọ bụ onye nduzi aka. The (ISC)² awade ọtụtụ e-amụta ohere nakwa, gụnyere 'Niile E-Ịmụta Agụmakwụkwọ’ n'ihi na $599 ma ọ bụ onye N'ezie modul maka $99 onye ọ bụla, nke ị nwere ike họrọ dabeere ma ị ga-abọ elu na otu ngalaba ma ọ bụ na ha niile.
Enwere 17 ukara CISSP ọzụzụ enye ke U.S. nakwa dị ka otutu ọzọ na enye na ndị ọzọ na-omimi e-mmụta na onye nduzi ọmụmụ. CISSP omume ajụjụ dị si ukara (ISC)² na ngwa na ntuziaka ma ọ bụ site na atọ ngwa. I nwekwara ike ibudata ụfọdụ omume ajụjụ na ule maka free si (ISC)² website.
Lee kasị mma CISSP online ọzụzụ ọmụmụ.
Na-ewere CISSP udomo
The CISSP udomo agụnye 250 ajụjụ weere na a kacha nke 6 awa. Ị na-amụ dabeere gburugburu asatọ ngalaba gụnyere:
Nche na Egwu Management
Akpan owo Nche
Nche nke Engineering
Nkwurịta okwu na Network Nche
Identity na Access Management
Nche Ịrụ Ọrụ
Software Development Nche
Onye ọ bụla na ngalaba na-ekewa ruo n'ime otutu modul na kpọmkwem na-elekwasị anya, ekwe ka ị na-aza na ihe niile dị a kpọmkwem ebe ozugbo. Ọtụtụ ajụjụ ndị otutu oke, ma i nwere ike na--jụrụ ịza dere ajụjụ dabere na ebe ị na-ahọrọ na-udomo. Ezie na e nwere 250 ajụjụ, naanị 230 nke ha na-graded, na ndị fọdụrụ 20 bụ mgbakọ na mwepụ, ma ị ga-enweta ihe niile nke ha ziri ezi iji nweta a zuru okè 1000 Akara.
Na ọtụtụ ikpe, gị ule results na-ẹmen n'oge ndenye ọpụpụ usoro, ozugbo ị gụsịa udomo oro. Otú ọ dị, ma ọ bụrụ na ntabi-arụpụta na-adịghị, mgbe ahụ, ị ​​ga-enweta ha site mail n'ime a kacha nke asatọ izu.
Ozugbo ị na-enweta gị ule results, ị nwere ike dejupụta CISSP Ngwa mbianye na àmà nke ọrụ ma na-akụziri, gị ule ọtụtụ, na onye na-mbianye site na (ISC)² so. Kwesịrị ị na-ada udomo oro, ị nwere ike ịkwụ ụgwọ ka ileghari ya ọzọ n'ime 30 ụbọchị, n'ihi na a kacha nke atọ ule n'ime otu afọ oge.
CISSP Ọrụ na Ohere
CISSP ẹkedọhọde mmadụ ruo eru maka a ọnụ ọgụgụ nke ọrụ gụnyere nche okacha, nche oru, IT nduzi na oru, nche auditors, nche architects, nche nnyocha, nche na usoro engineer, isi ozi nche ọrụ, nduzi nke nche, netwọk architects, na ndị ọzọ. N'ihi na dị ọrụ ukwuu ịdị iche iche maka CISSP e, ụgwọ etoju ịdị iche iche nnọọ a bit nakwa, ma a na mbio $60,000-$120,000 kwa afọ.
The CISSP bụ a na-akwanyere ùgwù na ọtụtụ ebe ghọtara asambodo na ọ onye pụrụ inyere gị aka gụkwuo gị ọrụ IT ma ọ bụ BỤ, n'agbanyeghị ihe ọnọdụ ị na-achụso. Ịmụ ma na-akwadebe onwe gị maka udomo dị mkpa ka n'ịhụ na ị rue na kasị elu na o kwere omume akara. Nweta ọzọ CISSP na cyber nche ọrụ ọmụma ebe a.
April 5, 2018 /0 Comments/site James Edge
http://crushtheinfosecexams.com/wp-content/uploads/2015/05/unnamed-1.png 500 500 James Edge http://crushtheinfosecexams.com/wp-content/uploads/2015/09/InfoSec-Logo1-300x41.png James Edge2018-04-05 17:08:002018-01-10 22:00:00CISSP Asambodo
Kpọtụrụ & Info
Atumatu & ngosi
CISA Courses & Asambodo
Best CISA Review Ọmụmụ
Best CISM Ọmụmụ Akụrụngwa & Review ọmụmụ
Copyright © 2018 CrushTheInfoSecExams.com. Ikike niile echekwabara.